आगामी निर्बाचनमा टानको केन्द्रिय अध्यक्षमा मेरो उमेदवारी ब्यबसायिक -बोधराज भण्डारी - ParyatanBazar.com
असोज १०, काठमाण्डौ। विश्वब्यापी कोरोना महामारीले थिलो थिलो पारेको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय आफ्नै बुतामा बिस्तारै बौरिने प्रयत्न गर्दै छ। लगभग दुई वर्ष ठप्प भएको यस क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पर्बतारोहण ब्यबसायी हरुको अग्रणी छाता संस्था “ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)” को निर्वाचन सन्निकट रहेको संदेश बिभिन्न ब्यबसायी अग्रजहरुको उमेदवारी घोषणाले उजागर गरिरहेको छ।
देश भित्रका पदयात्रा, पर्बतारोहण तथा अन्य साहशिक पर्यटकिय गतिबिधी गर्ने ब्यबसायिहरुको हित रक्षा, पर्यटकिय क्षत्रहरुको पहिचान र प्रवर्धन गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको टानको आगामी निर्बाचनमा केन्द्रिय अध्यक्षको रूपमा आकाङ्क्षी ब्यबसायिहरु मैदानमा उत्रिरहँदा बिगत ३ दशकदेखी यसै क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाएर स्वेदेश तथा बिदेशमा समेत नेपालको पर्यटनलाई चिनाउन सफल बरिष्ठ सफल पर्यटन ब्यबसायी बोधराज भण्डारीको नाम अहिले चर्चाको अग्रभागमा छ।
प्रस्तुत छ पर्यटन बजारका प्रतिनिधिद्वारा उहांसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
टानको आगामी कार्यसमितिको अध्यक्षमा तपाइको उम्मेदवारी के का लागी ?
मैले ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) को आउने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु। टानलाई सांचो अर्थमा पदयात्रा तथा पर्बतारोहण ब्यबसायिहरुको छाता संस्थाको रुपमा स्थापित गराउने मेरो मुल ध्यय हो। बिक्रित राजनीतिक खिचातानी बाट टानलाई मुक्त गरी ब्यवसायको रक्षा, सम्बर्धन, प्रबर्धन र बिकासमा टान लाई केन्द्रित गराउने उद्येस्य मेरो उमेद्वारीको मुख्य कारण हो।
टानको साख अहिले खस्किएको छ यस्तो अवस्थामा चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदा तपाईँको रणनीतिहरू के के छन् ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै टानको खस्किएको अवस्थालाई उकास्नु हो। टानको साख खस्किनुमा एक व्यक्ति मात्र जिम्मेवार नभएर सामूहिक रूपमा हामी व्यवसायीहरू, हाम्रा विभिन्न क्रियाकलापहरू र हामीले त्यस प्रति दिने महत्त्वले पनि भूमिका खेलेको छ। टानमा पुगेपछि हामीले व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थाको मूल्य बिकास गर्ने उद्देश्यले यदि हामी सबै लाग्यौ भने त्यसलाई उकास्न सकिन्छ र व्यवसायीहरूकै बिचमा अन्तरक्रिया गरेर व्यवसायीहरूको उत्थान कसरि हुन्छ, समग्र पर्यटनको उठान कसरि हुन्छ , पदयात्रा र पर्वतारोहण व्यवसाय नै नेपालको दिगो पर्यटनको बिकास हुने क्षेत्र हो,त्यो क्षेत्रको बिकास सँगसँगै हाम्रो व्यवसाय र हाम्रो संस्थाहरू पनि विकसित हुन्छन्। त्यसरी नै यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ र यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
चुनावमा तपाइको एजेन्डाहरू के के छन् ?
टानको आगामी निर्बाचनमा मेरा प्रमुख एजेन्डाहरु भनेको अहिले कोरोना महामारी बाट लगभग मृत प्राय बनेको पर्यटन क्षेत्र लाई प्रवर्द्धनात्मक हिसाबले अबको पोस्ट कोभिडको समयमा चैँ एकदम द्रुतगतिमा पहिलेको अवस्थामा फर्काउनु हो। पुरानो अवस्थामा मात्र नभएर यसलाई अझै अगाडि लैजानु पर्ने छ। त्यसको लागि संस्थागत ढङ्गले गर्न पर्ने बिभिन्न प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम हरु, ब्यवसाय ठप्प प्राय भएर निराश बनेका ब्यबसायिहरुलाई उज्यालो भबिस्य देखाएर उत्प्रेरणा जगाउने कार्य, बैंक तथा बित्तिय क्षत्र बाट उनिहरुले लिएको लोन लाई सरलिक्रित गरी तिर्ने ब्यबस्थाका लागी राज्यका निकायहरु संग समन्वय गर्ने, घरभाडा तथा कर्मचारी हरुको समय सापेक्ष पुनर्ब्यबस्थापना गर्न सहजिकरणको ब्यबस्था र टिम्स लगायत क्षेत्रमा टान जकडिएको छ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने कुराहरू छन्। टानलाइ आत्म निर्भर संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबल,र राष्ट्रिय रूपमा पनि संस्थालाई चिन्ने गरी अगाडि बढाउने काम नै मेरो मुख्य एजेन्डाहरु हुन।
तपाइको उम्मेदवारी पार्टीगत हुन्छ कि स्वतन्त्र ?
मेरो उम्मेदवारी पार्टीगत पनि हैन र स्वतन्त्र पनि हैन। मेरो उम्मेदवारी ब्यबसायिक उम्मेदवारी हो। बृस्ततमा भन्नुपर्दा बिगतमा हामीले (म समेत त्यसमा अछुतो छैन) ब्यबसायिक संघ संस्था हरुमा नेत्रित्व गर्ने ब्यक्तिहरु छान्दा राजनीतिक दलहरुले पार्टिगत निर्णय गरी संसद, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा मजदुर युनियन हरुको जस्तो गरी उमेदवारीका लागि टिकट दिने गलत परम्पराको सुरुवात गर्यौं। फलस्वरुप संघ संस्थाहरुमा चरम राजनीतिक खिचातानी हुने र ब्यवसायको भबिस्य भन्दापनी राजनीतिक पृष्ठभूमी तयार पार्ने र संस्थाको साधन र श्रोतको लापर्बाही दुरुपायोग गरी स्वयं संस्थाहरुलाइनै धराशायी बनाउने कामहरु भए। त्यसैको परिणाम अहिले पर्यटकिय संघ संस्थाहरु कमजोर र निरिह बन्दै गैरहेका छन। राजनीति निर्देशित प्यानल बनाएर चुनाब लड्ने र लडाउने जुन परिपाटी छ त्यसलाई अब सुधार गर्नु पर्छ र ब्यबसायिक हिसाबले ब्यबसायाकै नेतृत्व गर्न सक्ने गरी व्यक्ति तयार हुनुपर्दछ। ब्यबसायीहरुको प्यानल तयार हुनु पर्दछ। हुन सक्छ उनीहरुमा आफ्नो आफ्नो राजनैतिक आस्था होला तर त्यो चिज व्यवसाय तिर नजोडी समग्र पर्यटन क्षेत्रको हितको लागी काम गर्नु पर्दछ।
हामी सबैको समस्या पनि एउटै हो र समाधान पनि एउटै भएको हुनाले राजनैतिक बिचार, र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई बेग्ला बेग्लै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले उम्मेदवारी दिदा यिनै कुराहरुलाई आधार मानेर दिने निर्णय गरेको छु र अरु साथीहरुले दिन चाहानुहुन्छ भने यी कुराहरुलाई पनि प्रथामिकतामा राख्नुस भन्ने सुझाब दिन चाहन्छु। म भन्दा पनि अरु कोही आउन चाहनु हुन्छ भनेपनी म उहांहरुलाई स्वागतनै गर्न चाहन्छु। मिलेर टिम निर्माण गर्न र सहकार्य गर्न पनि म तयार नै छु।
चुनाव र आफ्नो उमेदवारी प्रती कत्तिको दृढ हुनुहुन्छ ?
मैले दृढ रूपमा रुपमानै यसपाली टानको नेतृत्व गर्ने चाहाना राखेको छु। ब्यबसायिक साथीहरुले रुचाएको खण्डमा मैले अबस्य नेतृत्व गर्नेछु। ब्यबसायिहरुले मलाई रुचाउनु हुन्छ या हुँदैन त्यो निर्वाचन ले नै निर्क्योल गर्ने छ।
निर्वाचनमा तपाइलाई भोट किन हाल्ने ?
बिगतमा पनि मैले विभिन्न संघसंस्थाहरुको नेतृत्व गरेको छु र अरु साथीहरुलाई नेतृत्वमा पठाउन मद्दत पनि गरेको छु। यस कारणले ब्यबसायहरुको एजेन्डा मैले राम्रोसंग बुझेको छु। पर्वतारोहण र पदयात्राका एजेन्डाहरू विशेष गरेर मैले राम्रो संग अध्ययन संगसंगै अनुभब गरेको छु, भोगेको छु र त्यसको बिरुद्द लडेको पनि छु। संगसंगै विभिन्न फोरमबाट त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेको छु। त्यसैले म आफुलाई आत्मविश्वास के छ भने यसको सहि नेतृत्व गर्ने सहि समय यहि हो। म भन्दा कम अनुभब भएका साथीहरुले यसको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले टान जस्तो संस्थाको नेत्रित्व गर्न मलाई कुनै कठिनाई हुने छैन। त्यो आत्मबिश्वास र इक्षाशक्ती म मा पर्याप्त छ। संस्थामा धेरै समस्याहरु छन र त समस्याहरु समाधानका लागि पहलकदमी लिने आकांक्षा म मा पलाएको छ। यहाँ धेरै समस्याहरु छन् र नै त्यो समस्यालाई समाधान गरौ भन्ने आँट लिएर नै नेतृत्व गर्ने चाहना सहित म अगाडि बढ्न तम्सेको छु।
अन्तमा टानका मतदाताहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
टानका मतदाताहरु आफैमा सबल र सक्षम हुनुहुन्छ। आजै मैले मलाई नै भोट हाल्नुस भन्दिन तर अहिलेको ब्यबसायीको बास्तबिक अवस्था, र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यो कठिनाईलाई मुक्ति दिलाउन उचित नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि हामीजस्तो ब्यबसायिक मुद्दालाई प्रथामिकतामा राखेर अगाडि बढेकालाई सहयोग गर्नु तपाईहरुको कर्तब्य हो। यहि मुद्दामा तपाइँ आफु पनि सक्षम हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। तर हामी अझै पनि कुनै पार्टि या दलको पुच्छर बनेर टिकट लिएर मैदानमा नउत्रौ। हामी आफ्नो सक्षमताको नेतृत्व गरौ र दलहरुलाई हाम्रो समर्थन गर्न वाध्य बनाऊँ ।